Ukuthi Amehlo Akho Ahamba Kanjani Kwiwebhusayithi | Martech Zone
Okokudala, ngiyaqiniseka ukuthi kukhona umuntu ngaphakathi obamemezelayo ukuthi behluke futhi agweme ukwakha iwebhusayithi ebukeka futhi isebenza njengabo bonke abanye abantu. Ngokombono wokumaketha, noma kunjalo, sifundise izivakashi zethu ngaphezu kweminyaka eyishumi manje ukuthi yini ongayilindela kuwebhusayithi nokuthi ungayisebenzisa kanjani ngempumelelo. Njengomsebenzisi, akukho lutho olukhungathekisa njengokuzama ukuthola imininingwane yokuxhumana naye, chofoza emuva ekhasini lasekhaya, noma uskene ikhasi kalula uma lingahlelwanga ngokwesiko lesimanje.
Ku-infographic engezansi, I-singlegrain ihlangene neCrazy Egg ukwethula imininingwane ewusizo ekulandeleni iso okungakusiza ukuthi uthuthukise ulwazi lomsebenzisi kuwebhusayithi yakho.
Umklamo ophendulayo ungeze kulokhu kuba yinkimbinkimbi - kuqinisekiswe ukuthi abaklami balinganisa kahle ihluzo kuyo yonke indawo yokubuka futhi banikeze ukusebenzisana okucindezela nje isithupha kude! Lokho kudinga amakhasi acatshangelwe kahle okulula ukuskrola, uthole okudingayo, bese ufunda futhi ukugcine.
Umklami wakho angahle alingeke ukuba enze okuthile okuhluke kakhulu… kepha ungamangali lapho lokho kuthinta amazinga wokuguqulwa nokuguqulwa njengoba izivakashi zikhungatheka futhi zihamba!
Tags: iqanda elihlanyayoukunyakaza kwamehloukulandela isoFukuthi amehlo akho ahamba kanjaniumklamo ophendulayoi-singlegrainiwebhusayithi f